10 Sababood oo Xasan Sheekh u mudan yahay in Markale la doorto. - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > 10 Sababood oo Xasan Sheekh u mudan yahay in Markale la doorto.
January 18, 2017 January 18, 2017 admin477
Tani waa qormo aan ku cabirayo aragtideyda ka muwaadin ahaa masuulka aan is leeyahay wuu ku haboonyahay inuu qabto xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadd Federaalka Soomaaliya, waxaa suurtagal ah adiga aqrisanaya inaad iga fikir duwan tahay.
Soomaaliya ayaa maraysa waqti doorasho, waxaana soo idlaaday inta badan doorashada xildhibaanada labada aqal (Golaha Shacabka iyo aqalka sare), waxaana 11 iyo 12 bishaan la doortay guddoonka Golaha Shacabka Soomaaliya, sidoo kale waxaa 22 bishan lagu madlan yahay doorashada Guddoonka Aqalka sare, halka doorashada Madaxweynaha la saadaalinayo dhamaadka bisha Feberaayo 2017.
Doorashada Madaxweynaha ayaa waxaa u sharaxan Musharixiin badan, oo inta badan xilal dalka ka soo qabtay, waxaana markaan dib ugu noqday taariikhda iyo waxqabadaka Musharixiinta iyo sababo kale oo la xariira sooyaalka Soomaaliya aan hoosta ka xariiqay in Mudane Xasan Sheekh Maxamuud aan maanta laga mudneyn qabashada xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayna haboon tahay in marka kale loo doorto xilkaan.
Sababaha aan ku xushay Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxa uu ku guuleystay siyaasadda dibadda, waxaana dhammaanteen marqaati ka nahay in siyaasadda Dibadda ee dalkeena Soomaaliya ay horay ukacii ugu sareeyey sameysay inta uu xilka hayey Xasan Sheekh, waxaana tusaale kuugu filan safaaradaha ka furan dalka oo kolkii hore Nairobi xafiisyadoodu ku yaaleen, iyo shirarkii heer sare ah oo ay martigalisay Caasimadda Muqdisho.
Dhameystirka Federaalka: Soomaaliya ayaa federaalka qaadatay sanadkii 2004, balse dowladda Xasan Sheekh ayaa ku guuleysatay dhameystirka Federaalka.
Dhismaha Ciidamada : Dowladda Xasan Sheekh ayaa horumarin iyo tayey ku sameysay Ciidamada Qalabka sida (Booliska , Xoogga, Asluub iyo Nabad suggidda iyo sirdoonka Qaranka).
Horumarinta Kaabayaasha Dhaqaalaha: Waxa uu Xasan Sheekh ku guuleystay Horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha (Dekaddaha, Garoomada, wadooyinka), sidoo kale waxa dowladiisu ku guuleysata hufnaanta maamulka dhaqaalaha dalka.
Ganacsiga : Sugidda Amniga iyo dhiirigalinta maalgashiga ayaa keentay in ganacsato badan oo Soomaali iyo Ajnabi isugu jira ay maalgalin xooggan ku sameeyaan dalka.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa leh mid ka mid ah sifooyinka hogaamiyaha wanaagsan, taas oo ah go’aan qaadasho xilliga loo baahan yahay.
Xasan Sheekh Maxamuud Waa musharax ay taageerayaan xisbi siyaasadeed sal balaaran.
Xasan Sheekh Maxamuud Waxa guul wax ku ool ah ka gaaray Dacwada Badda Soomaaliya, halka qaar ka mid ah Musharixiinta hadda sharaxan lagu eedeynayo inay arintaan gadashada badda lug ku leeyihiin.
Xasan sheekh Maxamuud ayaa leh khibrad Madaxweyne, waxaana Soomaalidu ku maahmaahdaa ” Guntimaha habeen qof xiraa gartaa”, hadii marka kale la doorto wuxuu fursad u helayaa dhameystirka howlaha dhiman, balse qof cusub la doorto wax ay noqonaysaa Jugjug meeshaada joog.
Xasan Sheekh Maxamuud Waa siyaasi dalka ku noolaa mudadii burburka, waxa uuna fahmi karaa caqabada Shacabka Soomaaliyeed heysta.
Sawirro: NISA oo soo bandhigtay Lacag Been abuur ah oo ay qabteen
April 3, 2019 Cali Yare
Bukaano Shuban soo ritay oo la dhigay isbitaalka Cadaado